IPL LASER HAIR REMOVAL Factory - Sinaina IPL Laser HAIR REMOVAL Mpanamboatra, mpamatsy
Fanesorana volo tsy misy fanaintainana OPT SHR IPL tsy misy fanaintainana sy fanalana volo IPL + RF N9
Ny hazavana pulsed intensive (IPL) dia fitsaboana amin'ny tarehy kosmetika. Mety hampiasa izany ny olona hampihenana ny fambara fahanterana na hanala volo tsy ilaina. Ny fampiasana hafa dia ahitana ny fampihenana ny fisehon'ny fery.
Ny IPL dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny fitsaboana amin'ny laser. Ny maha samy hafa azy dia ny hoe ny laser therapy dia manome halavan'ny halavan'ny angovo maivana, ny IPL dia manome onja lava maromaro.
OPT DPL IPL Laser Technique dia malaza sy fiarovana treamtnet amin'ny fanesorana volo, fanesorana ny kentrona, fanamainana hoditra, fihenan'ny pores, tsy maharary, mahomby ary haingana toa valiny mahafa-po an'ny entana ampiasain'ny Salon.
Professional OPT IPL manala ny volo amin'ny fanavaozana ny hoditra N8
Ny hazavana dia entin'ny melanin ao amin'ny fololon'ny volo. Amin'ny alàlan'ny vokatra optika sy hafanana namboarina sy nalaina avy tamin'ny hazavana, dia mahatratra ny tanjon'ny fanesorana volo tsy ampoizina.
Misafidiana maharitra IPL Dpl Pigment Therapy momba ny hoditra fanalefahana milina fanesorana volo E9SH
DPL IPL SHR dia midika ho fanesorana volo faran'izay lehibe izay mampiasa ny teknolojia mandroso indrindra "mihetsika" hanaovana fitsaboana fanesorana volo tsy misy fanaintainana. Izy io dia afaka mamoaka tifitra 10 amin'ny 1 segondra izay mampihetsika ny fitsaboana.
Milina fanatsarana tarehy 3 amin'ny 1 fanalefahana ny hoditra fanesorana volo E-Light IPL RF ND YAG Laser Multifunction Equipment E11B
Multifunction Beauty Salon Instrument Elight Shr IPL RF YAG Laser Fanesorana volo sy fanalàm-bolo fanamainana fitaovana mahomby amin'ny fanesorana volo maharitra, fanesorana tatoazy, fanesorana pigment, fanondrotana tarehy. Fanamainana hoditra…
3 Mitantana Multifunction Elight IPL RF YAG Laser Tattoo Removal Opt Hair Removal Machine E6Q
Fitaovana hatsaran-tarehy multifunctional IPL / Q Switch ND YAG Laser / Masinina RF miala amin'ny fitsaboana Fanesorana volo, fanesorana ny tatoazy, fanondrotana tarehy, fikolokoloana ny hoditra ..
Teknolojia ivoahan'ny OPT (Optimal Pulse Technology), mampiasa ny teknolojia teknolojia 3D: Angovo + sakany, + onjam-pezy. Ny zava-dehibe dia ny fanatsarana tsara ny fitaovana,
Portable RF Wrinkle Removal IPL manala volo fanalefahana ny hoditra Beauty Salon Fitaovana E9B
Ny hetsika photothermic sy photochemical dia hateraky ny taratra IPL. Amin'ny lafiny iray, ny IPL dia hampiroborobo ny famerenana sy ny fananganana collagen izay mahatonga ny hoditra ho malefaka kokoa sy malama.
Fitaovana manatsara tarehy multifunctional IPL volo fanesorana Q Switch ND YAG Laser Tatto fanesorana masinina E9SQ
Ny teknolojia E-Light dia manambatra tanteraka ny tombotsoan'ny angovo optika sy ny fahita matetika amin'ny radio. Miaraka amin'ny fahasamihafana eo amin'ny hoditra sy ny hafanana mialoha vokarina rehefa mifantina mifoka angovo optika ny hoditra,